दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि विकास खर्चबारे पूरानै ट्रेण्ड हुनु दुर्भाग्य: पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला - Narayanionline.com
दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि विकास खर्चबारे पूरानै ट्रेण्ड हुनु दुर्भाग्य: पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला
काठमाडौं, असार १७-
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि विकास खर्चबारे पूरानै ट्रेण्ड देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौंमा गरेको साक्षात्कारमा कोइरालाले भने, ‘विकास त सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । असारे विकासको कुरा गर्दा पहिले अस्थायी सरकार भन्ने बनिबनाउ कारण थियो, अब स्थायी सरकार आएको छ । दुई तिहाईको सरकार बनेपछि पूरानो रोग कम हुने आधार थियो । उनले आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यान्वयन निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीपन देखाउनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ । उनले भने,‘कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले बजेटमा परिपक्व योजनामात्रै पार्नुपर्ने धारणा राखे । ठेक्का, टेण्डर दाबी विरोधमा पनि केही समस्या रहेको उनको टिप्पणी छ । लगाइएका ठेक्काहरुको अनुगमन राम्रोसँग गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले कर्मचारी समायोजनको नाममा लामो समय अलमल गरेको र संघीय संरचना तयार पार्दा विकास निर्माणको काममा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । उनले भने,‘सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ ।’
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले असारे विकासको बारेमा टिप्पणी गर्दा विगतमा विसंगति र विकृति रहेको सुनाए । उनले भने,‘४० देखि ५० प्रतिशत खर्च असारमा हुँदा गुणस्तर कम हुन्छ ।’ बजेट विनियोजन, जवाफदेहीता र पारदर्शीता प्रणाली नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
खनालले बजेट प्रणाली नै बेथिति रहेको सुनाए । उनले भने,‘अब बजेट विनियोजन, खर्च भुक्तानी प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अहिलेपनि ‘जिरो सम गेम’ जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । खनालले अब प्रणालीगत रुपमै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘बजेट ठीक कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।’
अहिले पनि कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट नभएको खनालको टिप्पणी छ । उनले भने,‘हाम्रोमा जेठ १५ देखि असार मसान्तको कार्ययोजना भएन । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता हुनुपर्छ । टाइम बाईको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउने खालको कार्ययोजना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । खनालले हिजोसम्मको पुँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत पुगेको सुनाउँदै जथाभावी हुने खर्च रोक्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘बेठीक ढंगले हुने खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन ।’ बजेट कार्यान्वयनको सवालमा अहिले पनि समन्वयको कमी देखिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘४५ दिनको वर्क प्लान खोई ? एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ । काम भएन भने मन्त्रीलाई समेत दण्डित गर्नुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्वमन्त्री दिपक खड्काले तत्काल प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने हल्ला छ, मन्त्रीहरु पनि परिवर्तन गर्ने हल्ला छ । अहिले मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन । यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ ।’ खड्काले वर्तमान सरकारसँग पाँच वर्षको स्पष्ट म्याण्डेट भएकोले हेलचेक्रयाँई गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यदि यो पाँच वर्ष हेलचेक्र्याइँ गरियो भने मुलुक २५ वर्षपछि पर्छ ।’ उनले थपे,‘यही सरकारलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्छ ।’
महाधिवेशनका विषयमा निर्णय गर्नका लागि ओलीले बोलाए केन्द्रीय कमिटीको बैठक
देउवाले बोलाएको तीन दलीय बैठक शुरु
माओवादी केन्द्रले गर्‍यो गृहमन्त्री बादललाई पनि कारबाही
सांसदबाट निलम्बित भएका चार मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, ५ बजे शपथ
जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमायो : सभापति देउवा
कुशलको लगातार दोस्रो अर्धशतक
जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठको परिवारका पाँचै जनालाई कोरोना
नेपाली सेनाले गर्यो गढी संरक्षणसम्बन्धी छलफल र सरसफाइ
साइक्लिङको क्रस कन्ट्रीमा नेपालले जित्यो स्वर्ण
गत आर्थिक वर्षमा नारायणी र राप्ती नदीमा नौ गोही मरे
सशस्त्र द्वन्द्वका हिंसापीडित महिला भन्छन्– कहिले पाइएला न्याय?
कोरोना भाइरसले अमेरिकामा ४५ हजारको मृत्यु
रंगशालामा प्रकाशन समितिको पहिलो बैठक
काठमाडौंमा मोटरसाइकल चोरी गर्ने ११ पक्राउ